Eyona injini ingabonakaliyo 4 yemidlalo ye-android kunye ne-ios
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Eyona midlalo ilungileyo ye-Unreal 4 yemidlalo ye-Android kunye ne-iOS
Eyona midlalo ilungileyo ye-Unreal 4 yemidlalo ye-Android kunye ne-iOS
Injini ye-Unreal 5 ibonisiwe kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kodwa kuya kuba lixesha ngaphambi kokuba imidlalo yakhiwe ngayo ibabaze ii-smartphones zethu. Kude kube lelo xesha, nangona kunjalo, sinokuyithanda imidlalo eyenziwe kunye nomanduleli wayo, i-Unreal Injini 4. Kwaye yile nto kanye sinayo kuwe namhlanje!
Oku kukudityaniswa kwezona midlalo zilishumi zingcono ze-Unreal 4 ze-Android kunye ne-iOS. Nangona zakhiwe zisebenzisa injini enye, izihloko ezikolu luhlu zahluke kakhulu kwisitayile nakumdlalo wokudlala. Oko kuthethiweyo, lixesha lokuya kwimidlalo eyiyo!
KwiBo.T uthatha ulawulo lwee-mech ezinkulu ezifana nezo uza kuzifumana kwiTitanfall. Ayothusi into yokuba injongo yakho kukutshabalalisa ii-mech zeentshaba zakho ngelixa usilwa nolawulo lwemephu. Iimodeli ezahlukeneyo zinamandla kunye nobuthathaka bazo kwaye kunjalo, ungaziphucula usebenzisa imali yomdlalo. Umdlalo usebenzisa ngokupheleleyo i-Unreal Injini ye-4 eneemodeli ezinamanqanaba kunye namanqanaba. Enye into epholileyo kukuba i-titan yakho ithatha umonakalo okwenyani onokukhubaza iinxalenye zawo, umzekelo, imipu ethile. Oko kunika ithoni yokwenyani edabini kwaye kukwenze usebenze nzima ukukhupha impumelelo.
I-Shurado ngumdlalo malunga ne-1 v 1 i-duels ezenziwe ngesitayile kumxube wexesha eliphakathi laseJapan kunye neMiphefumlo emnyama. Ulwa indlela yakho yokuphuma kwelabafileyo kwaye oko kuthetha ukuya kwiqela labalindi abagcina isango. Ngelixa ulawulo lunokubonakala ngathi lulula kakhulu, xa usemfazweni, umdlalo omangalisayo uyothusa kakhulu, ke awunakuzibona iintlobo ezincinci zohlaselo onokuthi uzenze.
Kukho izixhobo ezingaphezu kwe-130 zokuvula, ezinezibalo ezahlukeneyo kwaye zinokuphuculwa ukuze zibe namandla ngakumbi. Ukuba uyazityeshela izixhobo zakho, kuya kukuthatha ngonaphakade ukoyisa iintshaba kamva kumdlalo.
Ngokungafaniyo noShurado, kukho itoni eyenzeka kuyo yonke indawo ngelixa udlala iM.A.D 8. Inombolo yesi-8 inxulumene nenani eliphezulu lamagorha oya kuthi ulawule kwimfuno yakho yokoyisa iintshaba kunye nabaphathi abanamandla. Bonke banezakhono ezizodwa ekuya kufuneka uzisebenzise ngobuchule ukoyisa ezona ntshaba zinzima. Ngaba akungomntu othanda ukudlala ngokuchasene nabachasi be-AI abangenangqondo? Ewe, zama imo ye-4 v 4 ye-PvP ukuze ubone ukuba ulunge kangakanani!
Ewe izixhobo ziyinxalenye enkulu yazo zonke i-RPG kunye ne-MAD ngaphandle kwaleyo. Kukho iintlobo ngeentlobo zezixhobo kunye nezinye iintlobo zegiya ezinokwenza amaqhawe akho omelele kwaye konke kuyahlaziywa.
Iimidlalo ezininzi zesimbo se-anime zisebenzisa i-Unreal Injini 4, kuye kwafuneka sidibanise enye yazo. Kwaye ukhetho lwethu luyi-Overhit. I-Overhit yi-RPG enemizobo eyoyikisayo kunye nemiphumela eqaqambileyo oyilindeleyo kumdlalo onje. Hlanganisa iqela lamagorha avela echibini labalinganiswa abangaphezulu kwe-120 kwaye usebenzise izakhono zabo ngendlela eyenza ukuba uluhlu lwakho lomelele kunesibalo samalungu alo.
Sukujonga ubunyani kulo mdlalo, konke malunga nokuba kwi-adventure ye-epic kunye nokoyisa izidalwa ezimnandi. Kwaye xa isiza kuloo nto, iOverhit yenza umsebenzi omkhulu.
Molo ngummelwane ngumdlalo owahlukileyo kakhulu. Imizobo yayo yekhathuni iyinika ukonwaba kodwa abadali bayo bayichaza njengomdlalo owoyikisayo wobusela. Kwaye abalunganga. Umdlalo ungaziva unamandla ngelixa ujikeleza indlu yommelwane wakho ngelixa efuna ukukufumana. Yintoni eyenza ukuba umsebenzi wakho ube nzima ngakumbi kukuba i-AI elawula ummelwane iya kulungelelanisa ngokubhekisele kwindlela oziphethe ngayo. Oku kuphucula kakhulu ukubuyiswa komdlalo ongeyonto inokuthiwa kwimidlalo emininzi yolo hlobo.
Ukuba uthanda ukurhanelwa kokungaziwa kwaye ungakhathazeki ukuphangwa amaxesha ngamaxesha, uya kuyonwabela ngokwenene uMmelwane.
Emva kwempembelelo-Elite Army
Baninzi abadubulayo abadumileyo abasebenzisa i-Unreal Injini 4 kwaye unokuzibuza ukuba kutheni bengekho kolu luhlu. Ewe, uninzi lwazo sele silufakile kolunye udibaniso lwethu, ekufuneka ujongisise kulo ngendlela, kwaye sikhetha ukuba nezihloko ezininzi ezibanzi. Kungenxa yoko le nto sifake i-Afterpulse-Elite Army.
I-Afterpulse iyafana ne-Call of Duty enemisebenzi ekhethekileyo yokulwa imeko kunye nezixhobo. Inika iintlobo ezahlukeneyo zeendlela zemidlalo ezibandakanya imo yomceli mngeni we-co-op apho wena kunye nomhlobo unokuvavanya izakhono zakho ngaphandle koxinzelelo lomdlalo opheleleyo wabadlali abaninzi.
Ngaba umntu ofayo uKobat ufuna ukungeniswa? I-franchise efundise sonke isizukulwana ngakumbi malunga nokwakheka komntu kuneeklasi zebhayoloji yesikolo. Into eyayikade ibubumdaka obubomvu kwipikseli ngoku ihanjiswe kakuhle nge symphony yegazi kunye ne-gore. Kwaye ngelixa ii-smartphones zethu zingenazo ii-arcade zolawulo ezingenakutshatyalaliswa esinokuthi sizilibale, uMortal Kombat usanelisa ukudlala kunye neelekese zokwenyani ukuba awuyongxaki. Kwaye kungcono ungabi njalo, kuba abaphuhlisi babeke iinzame ezininzi zokujonga ukubhubha kweyona ndlela ibalaseleyo.
Ubomi buyinto engaqhelekanga ngumdlalo onobunzulu imidlalo embalwa eneselfowuni. Ibali elicingwe kakuhle liza kubandakanyeka ngokupheleleyo ngelixa usombulula imfihlakalo umlinganiswa ophambili akhubeka kuyo. Umculo, ukusebenza kwelizwi kunye noyilo olupheleleyo kukunceda ukuba uzicwilise nangomboniso omncinci wefowuni yakho. Kwaye ayisiyiyo neyona nxalenye intle. Umdlalo uneziphelo ezininzi onokufikelela kuzo kuxhomekeke kwizigqibo ozenzayo kumdlalo wonke. Ngokuqinisekileyo, kuya kufuneka uphinde udlale umdlalo ukuze ubabone bonke, oya kuthi uyenze ngovuyo. Ubomi buyinto engaqhelekanga ayingomdlalo wokubulala ixesha ngexesha lokuhamba kwakho, kodwa endaweni yoko ukonwabele ngeCawa emnyama.
Ukungabi nabulungisa 2
Ukungabi nabulungisa 2 ngomnye umdlalo wokulwa kodwa ngabalinganiswa baziwa ngakumbi kunabo baseMntwini uKombat. Superman, Batman, iFlash, uMfazi oMangalisayo ... abalinganiswa abambalwa be-DC oza kuba nakho ukufumana nokulawula. Abanye babantu bakho obathandayo abanjengoJoker balapha nabo, ewe. Hlanganisa iqela lesithathu uze ungene kwi-fray. Gqibezela imiceli mngeni kwinqanaba lehlabathi okanye ulwe nabanye abadlali kwimowudi yePvP, ukhetho lolwakho. Ukuphuculwa kunye nokungavuleki akuzange kuwutyeshele loo mdlalo, amaqhawe akho aya komelela njengoko udlala kunye.
Ukuphakama kobumnyama ngumdlalo ofanelwe ngokwenyani sisihloko esithi 'amava amava'. Imizobo kunye nesitayile sokudlala sisikhumbuza uThixo weMfazwe, kunye nezinye iindlela zokugqibela ze-badass zokukwenza uzive ngathi ukhaba iesile. Ebumnyameni buyaphakama, nangona kunjalo, unokukhetha kwiiklasi ezine, nganye inezakhono zayo, amandla kunye nobuthathaka, kwaye ungenza ngokwezifiso ukubonakala komlinganiswa wakho kolo thando longezelelekileyo.
Abaphathi be-epic baya kubeka izakhono zakho kuvavanyo kwaye ukuba bakwenza ubile kakhulu, ungasoloko ugqogqa umhadi okanye ujongane nabanye abadlali. Owu, kwaye khange sitsho ukuba ungakhwela iidragons? Kuba unako ngokupheleleyo!
ebay samsung galaxy s7 umda uvuliwe
Eyona meko yesikhumba ye-Samsung Galaxy S8 kunye ne-S8 +
Ezona zikhuseli zibalaseleyo zeSamsung Samsung S21 Ultra
Idili: I-32GB yendawo eGrey i-iPhone 6 yi- $ 200 nje ngaphandle kwesivumelwano kwiVirgin Mobile